Lozam-pifamoivoizana tany amin’ny RN4 : Tafakatra telo ireo olona namoy ny ainy -
AccueilSongandinaLozam-pifamoivoizana tany amin’ny RN4 : Tafakatra telo ireo olona namoy ny ainy
Ankoatra ilay raim-pianakaviana maty tsy tra-drano vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin’ny lalam-pirenena fahefatra , afak’omaly tokony ho tamin’ny 02 ora tolakandro , dia fantatra fa namoy ny ainy ihany koa ny mpivady lehibe izay tsy iza fa rafozan’ity farany ihany. Mbola nanaraka fitsaboana teny amin’ny hopitaly Hjra Ampefiloha hatramin’ny omaly kosa ny vadin’io lehilahy maty teo noho eo io sy ny zanak’izy ireo mianadahy, ary ny mpanampiny. Araka ny loharanom-baovao, dia tao amin’ny hopitaly Mahatsinjo no namoy ny ainy ilay ramatoa lehibe raha toa ka teny an-dalana hiakatra aty Antananarivo, hamonjy eny amin’ny hopitaly Hjra no maty ilay rangahy be, izay voalaza fa kolonely efa misotro ronono. Raha tsiahivina, dia teo amin’ny tetezan’i Mamokomita, tsy hiditra an’i Mahatsinjo no nisehoan’ity lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ity.
“Tsy hay izay tena nahatonga ny loza fa ny hita, dia nifatratra tany amin’ny hantsana ilay fiara rehefa tafavoaka ny arabe”,hoy ny fanamarinam-baovao. Raha ny voalaza hatrany ihany koa, dia efa nivadibadika ilay fiara talohan’ny nifatrarany tany amin’io toerana io. Noho ny hamafin’ny dona nihatra tamin’ity fiara Nissan niharan-doza ity, dia maty teo noho eo ny mpamily raha toa naratra mafy ireo mpivady lehibe. Tapa-tanana ilay renim-pianakaviana, ary tapa-tongotra ny mpanampin’izy ireo. Voa teo amin’ny feny ary nahitana tresaka kosa ny lohan’ilay zazavavikely manodidina ny 09 taona , raha toa ka tsy dia naninona ilay zazalahy kely. Ankoatra ny aina nafoy sy ny naratra moa, dia niforitra mihitsy ny lohan’ilay fiara, ary vaky ihany koa ny fitaratra manoloana.
Raha sokomotra tamin’ny famonjena ireto fianakaviana niharan-doza avy namonjy fialan-tsasatra tany Mahajanga ireto ny olona sasany nanatri-maso ny zava-nisy, dia tao kosa ireo nanararaotra nangalatra. Araka ny loharanom-baovao ihany mantsy, dia nanjavona avokoa ny vola sy ny entana rehetra tao anatin’ilay fiara taorian’io loza io . Izay tokoa ve izany ilay hoe “mpanararao-paty”? Tonga nijery ifotony ny zava-nisy moa ny zandary tany an-toerana vantany vao nahazo fampandrenesana mahakasika ity tranga ity. Efa natolotra ny fianakaviany kosa ny vata mangatsiakan’ireo namoy ny ainy.